Kuuriyada Waqooyi oo Mareykanka ku eedaysay inuu kicinayo colaad kuna boorisay Biden inuu soo afjaro Colaada | Dayniile.com
Home Warkii Kuuriyada Waqooyi oo Mareykanka ku eedaysay inuu kicinayo colaad kuna boorisay Biden...
Kuuriyada Waqooyi oo Mareykanka ku eedaysay inuu kicinayo colaad kuna boorisay Biden inuu soo afjaro Colaada
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay ku eedaysay Mareykanka inuu kicinayo colaad, iyadoo dalbatay in maamulka madaxweyne Biden inuu soo afjaro dhoollatus milateri oo ay ciidammadiisu la wadaan kuwa Kuuriyada Koonfureed.
Danjiraha Pyongyang u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa markii uu soo fuulay masraxa Golaha loo dhanyahay ee Jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa, waxaa dalkiisa uu tijaabiyay gantaal kale.
Tijaabinta gantaalkan ugu dambeeyay ee Kuuriyada Waqooyi ayaa loo tuuray dhanka bariga Japan ka hor inta uusan ku dhicin badda, sida ay sheegeen milatariga Kuuriyada Koonfureed.
Saraakiisha Japan ayaa rumeysan inay dhici karto inuu ahaa gantaal nooca ballistic ah, hase yeeshee weli Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaan xaqiijin nooca uu yahay gantaalka.
Tijaabooyinka gantaallada ee Kuuriyada Waqooyi ayaa u muuqda kuwo looga dan leeyahay in lagu cadaadiyo Washington iyo Seoul maadaama xukuumadda Pyongyang loo malaynayo inay dareemayso saamaynta cunaqabatayn adag oo caalami ah.
Markii warka tijaabada gantaalka la sii daaynayay, safiirka Kuuriyada Waqooyi Kim Song ayaa khudbad ka jeedinayay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Wuxuu sheegay inay lama huraan tahay in la iska difaaco hanjabaadaha Mareykanka, wuxuuna ku eedeeyay Kuuriyada Koonfureed inay khiyaameysay heshiisyadii nabada ee labada kuuriya iyadoo mudnaanta koowaad siisay ayuu yiri saaxiibkeeda reer Galbeedka kana door bidday “wada noolaanshaha qaranka”.
Previous articleDanjiraha Soomaaliya ee Kuwait oo kulan laqaatay dhigiisa Tunisia u jooga Kuwait
Next articleRaisal Wasaare Rooble “ Khilaaf kasta iyo is-qab-qabsi kasto wuxuu dhammaanayaa, marka ay doorashadan noo hagaagto daawo Muqaalka
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafdi uu hogaaminayo oo Safar maalmo qaatay ugu maqnaa Magaalooyinka Muqdisho iyo Baraawe ayaa...